भारत र पाकिस्तान विचकाे क्रिकेट कुनै युद्ध भन्दा कम हुन्न ! - Nepal Cricket
भारत र पाकिस्तान विचकाे क्रिकेट कुनै युद्ध भन्दा कम हुन्न !
आईसीसी विश्वकप क्रिकेट प्रतियोगिता अन्तर्गत आइतबार खेलमा भारत र पाकिस्तान भिड्दै छन् । म्यानचेस्टरको मैदानमा आमने सामने हुन लागेका भारत र पाकिस्तानबीचको खेल जारी विश्वकपकै सर्वाधिक चासोको रुपमा हेरिएको छ । तर सोही दिनको मौसमले पनि यस खेललाई प्रभाव पार्ने अनुमान गरिएको छ ।
भारत र पाकिस्तान विश्वकपमा अहिलेसम्म ६ पटक भिडेका छन् । जसमा हरेक पटक भारत नै विजयी हुँदै आएको छ ।
विश्वकपमा भारतमाथि हावी हुन नसके पनि एक दिवसीय क्रिकेटमा पाकिस्तान नै भारतभन्दा अगाडि रहेको छ ।
भारत र पाकिस्तानकाबीचमा अहिलेसम्म १३१ एक दिवसीय क्रिकेट खेल भएका छन् । जसमा पाकिस्तानले ७३ म्याच जित्दा भारतले ५४ म्याचमा मात्रै जितको स्वाद चाखेको छ । ४ खेलमा भने नतिजा आएन ।
भारत र पाकिस्तानबीचको क्रिकेट सधैं फाइनल जस्तै हुन्छ । भारतले अहिलेसम्म २ पटक विश्वकप जितेको छ भने पाकिस्तानले एक पटक मात्रै विश्वकपको ट्रफी लिएर पाकिस्तान आएको छ ।
भारत र पाकिस्तानका बीचमा राजनीतिक वातावरण धमिलो भएका बेला इंग्ल्याण्डमा हुन लागेको यो खेललाई दुवै देशका समर्थकले प्रतिष्ठाको विषय बनाएका छन् । आईतबार हुने प्रतियोगिताका लागि दुवै देशका सञ्चार माध्यमहरुले पनि आ आफ्नै तरिकाले प्रचार सामाग्रीहरु बनाएका छन् । जसमा दुवै देशले एक अर्कालाई होँच्चाएका पनि छन् ।
भारत र पाकिस्तान पहिलो पटक १९९२ को विश्वकपमा भिडेका थिए । विश्वकप शुरु भएको १७ वर्ष पछि पहिलो पटक भारत र पाकिस्तान आमने सामने हुँदा भारत विजयी भयो ।
त्यसमा भारतीय खेलाडी सचिन तेन्दुलकरको नट आउट ५४ रनको मद्दतले पाकिस्तानसामू २१७ रनको लक्ष्य दिएको थियो । तर पाकिस्तानी टिम १७३ रनमा समेटिन पुग्यो । तर त्यतिबेला भारतसँग पराजित भए पनि अन्ततः पाकिस्तानले इंग्ल्याण्डलाई पराजित गरि पहिलो पटक उपाधि जितेको थियो । त्यतिबेला उपाधि जितेका कप्तान इमरान खान अहिले पाकिस्तानको प्रधानमन्त्री बनेका छन् ।
भारत र पाकिस्तान दोस्रो पटक १९९६ मा भिडेका थिए । जसमा पाकिस्तान ३९ रनले पराजित भएको थियो । भारतको चिन्नास्वामी स्टेडियममा भारतका ओपनर व्याट्सम्यान नवजोत सिंह सिद्धूले ९३ रनको पारि खेल्दै उत्कृष्ट सुरुआत दिलाएका थिए । यसैगरी अजय जडेजाले ४५ रनको महत्वपूर्ण इनिङ्स खेलेपछि भारतले २८७ रनको लक्ष्य दिएको थियो ।
पाकिस्तानका सइद अनवर र अमिर सोहेलले गतिलो शुरुआत गरे पनि मध्यक्रमका व्याट्सम्यान टिक्न नसक्दा पाकिस्तान पराजित भएको थियो । पाकिस्तानका लागि जावेद मियादाद र सलीम मलिकले पनि राम्रो खेले पनि भारतीय स्पिनर अनिल कुम्बले र बेंकटपति राजूका सामू टिक्न सकेनन् ।
भारत र पाकिस्तान तेस्रो पटक १९९९ को विश्वकपमा भिडेका थिए । जसमा भारतले ४७ रनले विजयी भएको थियो । भारतीय टिमले पहिला ब्याटिङ गर्दै २२७ रन बनाएको थियो । जसमा राहुल द्रविडले ६१ र सचिनले ४५ रन बनाएका थिए । कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीनले पनि ५९ रन बनाएका थिए । तर पाकिस्तान १८० रनमा समेटिन पुग्यो । भारतका लागि बेंकटेश प्रसादले ५ तथा जवागल श्रीनाथले ३ विकेट हात पारेका थिए ।
भारत र पाकिस्तान चौथो पटक २००३ को विश्वकपमा पनि भिडेका थिए । जसमा भारत ६ विकेटले विजयी भएको थियो । पहिला ब्याटिङ गर्दै पाकिस्तानले २७३ रन बनाएको थियो । जसमा साइद अनवले १०१ रनको शतकीय पारि खेले । भारतका लागि सचिन तेन्दुलकरले ९८ रन बनाउँदा युवराज सिंह र राहुल दव्रिड नट आउट रहँदै ५० र ४४ रन जोडेका थिए । उक्त खेल भारतले २६ बल बाँकी छदै पुरा गरेको थियो ।
पाँचौ पटक भारत र पाकिस्तान २०११ मा भिडेका थिए । संकट मोचकको रुपमा सचिन तेन्दुलकरले खेलेपछि पाकिस्तान २९ रनले पराजित हुन पुग्यो । भारतले पहिला ब्याटिङ गर्दै २६० रन बनाएको थियो ।
जवाफमा पाकिस्तान २३१ रनमा समेटिन पुग्यो । पाकिस्तानका लागि मिस्बाह उल हकले ५६ रन जोडेपनि हार टार्न पयाप्त बनेन् । २०११ को विश्वकप भारतले जितेको थियो ।
भारत र पाकिस्तान विश्वकपको छैटौं भिडन्त २०१५ मा भएको थियो । जसमा पाकिस्तान ७६ रनले पराजित भएको थियो । भारतका लागि विराट कोहलीले १०७ रन बनाउँदा सुरेश रैनाले ७४ र शिखर धवनले ७३ रन जोडेका थिए । ३०१ रनको लक्ष्य पछ्याएको पाकिस्तान २२४ रनमा समेटिन पुग्यो । अब सातौं भिडन्त आइतबार हुँदैछ । यो भिडन्तको नतिजा कस्तो आउला तपाई अनुमान गर्दै बस्नुस है । तर त्यस दिन पानीले खेल प्रभावित पार्ने आंकलन पनि गरिएको छ ।